Sidee ku suurta-gashay in gabar Ugaandhees ah ay kallideeda ugu deeqdo nin Soomaali ah?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Sidee ku suurta-gashay in gabar Ugaandhees ah ay kallideeda ugu deeqdo nin...
Sidee ku suurta-gashay in gabar Ugaandhees ah ay kallideeda ugu deeqdo nin Soomaali ah?!
Waa Cabdiraxmaan iyo Mariam oo isla sawiran.
Norway (Halqaran.com) – Waa dhacdo hadal hayn badan dhalisay kana farxisay Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim oo loo garan ogyahay (Cabdiraxmaan Waryaa) isla markaana mudo dhowr sano ah daris la ahaa xanuun ka haleelay Kelliyaha kaas oo markii ugu horeeysay uu isku arkay sanadkii 2015-kii xili uu soo gutay waajibaadka Xajka. Wuxuu ku nool yahay dalka Norway.
Dadka qaar ayaa u riyaaqay sida binu aadinimada leh ay gabadhaan u caawisay Cabadiraxmaan oo mudo la il darnaa xauunka kalyaha waxaana uu sheegay in aysan wax dhaqaale ah waydiisan oo iyado qaadatay go’aan geesinimo leh.
Gabar ugaandhees ah
oo kali loogu deeqay